Microsoft dia manolotra maodely vaovao amin'ny Surface Book ao amin'ny magazay ofisialiny | Vaovao momba ny gadget
Raha manitatra ny isan'ny firenena ahafahanao mividy ny Surface Book ny tovolahy ao amin'ny Microsoft, misy amin'ny vitsivitsy izao, ny bandy ao amin'ny Microsoft Nanisy maodely Surface Book vaovao fotsiny izy ireo miaraka amina andinin-teny mahaliana sasany. Tsiahivina fa ny fanavaozana farany indrindra an'ity fitaovana ity, farafaharatsiny ao anatiny, dia natomboka vetivety talohan'ny faran'ny taona, fanavaozana izay tsy voarain'ny Surface Pro, izay mety hanondro fa manakaiky ny fanavaozana ny takelaka Microsoft. Ny Surface Book no maodely premium indrindra indrindra azontsika jerena eny an-tsena, izay mifanentana amin'ny fampitaovana dia tonga lafatra, koa raha mitady fitaovana tsy manome olana anao ianao, ny Surface Book no solosainao tadiavinao. ho an'ny.
Microsoft dia nanisy maodely Surface Book i7 vaovao, maodely miaraka amina processeur Generation faha-7 Intel Core i16, RAM 1 GB ary tahiry XNUMX TB. Hatreto dia toa ara-dalàna daholo izany, fa ny manaitra dia ny tsy nanolorany karatra sary natokana ho an'ny NVIDIA, Microsoft kosa nampiditra sary Intel HD tao anatiny. Amin'izao fotoana izao dia tsy hita eny an-tsena ity maodely vaovao ity, na dia efa hita ao amin'ny tranonkalan'ny mpanamboatra aza izany.
Ity maodely Surface Book vaovao ity dia mahatratra 3.199 $, ka io no maodely lafo indrindra amin'ny zavatra rehetra atolotry Microsoft an'ity anarana ity. Tao anatin'ny herinandro lasa Microsoft dia manolotra fihenam-bidy mahaliana ao amin'ny Surface Book, famantarana mety hitranga fa ny tovolahy ao amin'ny Microsoft dia mety hanomboka handefa ny taranaka faharoa amin'ity fitaovana ity, fitaovana iray izay hahita ny fanatsarana ny rafitra hinge, izay manolotra olana, tsy miasa, fa ny fanangonan-karena be loatra, noho ny ny rafitra famaranana atolotray antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » portable » Microsoft dia manolotra maodely vaovao amin'ny Surface Book ao amin'ny magazay ofisialiny